Ọ bụ ihe ezi uche dị na ịzụta backlinks homepage?
Isiokwu a ga-eme ka ị kwatuo ụzọ ị na-eme ebe obibi gị SEO. Otu n'ime ihe kachasị mkpa ndị ọkachamara SEO na-eche ihu na usoro nyochaa weebụ bụ na ndị mmadụ na-achọ ịkwado maka okwu ọchụchọ ha niile na ibe ha.Ndị mmadụ na-etinye oge ha, ego na mbọ iji nwetaghachi ihe ndekọ azụmazụ ụlọ ma mee ka ha zubere.
Otú ọ dị, ọ bụ eziokwu na maprịrị na map dị iche iche dị iche iche dịka i nwere ike iche n'echiche na enwere ihe odide nke anchor nwere ihe ọ bụla na-ezo aka na okwu ọchụchọ. Ị pụghị ịchọta arịlịka bara ọkpụrụkpụ ka ị wee nwee ike ịkwado maka okwu ọchụchọ gị. Ka anyị tụlee otú o si arụ ọrụ n'eziokwu.
Google nwere nnukwu ngalaba
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ mere Google ji enyekwuo ntụkwasị obi ma baa uru nye ngalaba ndị siri ike, azịza maka ajụjụ a bụ nnọọ dị mfe. Nnukwu na ogologo oge ngalaba nke na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ nweta backlinks na ha peeji nke n'ụzọ. Ndị ọrụ, yana weebụsaịtị ndị ọzọ, na-ejikọta ụdị ọkacha mmasị site na ọchịchọ ha n'ụzọ zuru oke. Ọ bụ ya mere Google nwere ike iji lee anya na profaịlụ njikọta site na nnukwu obi na-enwe obi ike na jide n'aka na maka ọtụtụ akụkụ azụlinks ha nwetara n '. Nkọwa akụkọ Backlink nke nnukwu ụdị kwesịrị ịbịara anyị dị ka ndebiri nke anyị kwesịrị ịgbaso iji gosipụta Google na a pụkwara ịmasị ika gị dịka ihe bara uru na nke ziri ezi. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịdebanye aha profaịlụ nke ụlọ weebụ nke nwere ọnọdụ TOP na SERP. Gini kpatara ozo? Otu ebe obibi na-eje ozi dị ka akwụkwọ kachasị mkpa na saịtị na kaadị ịchọrọ gị maka ndị ọrụ na search engines. Ọ bụ ebe ndị ahịa gị ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ ga-ejikarị jikọta gị na ebe Google nwere ike ịmepụta ntụkwasị obi gị.
Achọrọ m ịzụta backlinks maka ụlọ m?
A ga-ahazi ebe obibi ebe nrụọrụ weebụ gị iji nye akara ngosi ziri ezi maka engines ọchụchọ. Nchịkọta njinchọ nchọgharị na ibe maka ebe nrụọrụ weebụ na-enyere aka inwekwu okporo ụzọ na àgwà backlinks. Jiri ihe ọchụchọ ọ bụla ịchọrọ ileta. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị jikọta ụlọ, ị ghaghị igosi nrụgide. N'ezie, enwere ọnwụnwa iji akwụkwọ kachasị ike na saịtị gị iji chọpụta ihe ọchụchọ gị kachasị mkpa. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị cheta, akụkụ kachasị mkpa ị kwesịrị ịkwado okwu ebe a bụ iji wuo ntụkwasị obi na Google. Ruo mgbe Google nyere gị ntụkwasị obi, isi iyi weebụ gị agaghị ebuli elu. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị tụkwasịkwuo ntụkwasị obi, ị ga-agbakwunyere gburugburu gị n'ịntanetị.
E nwere ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ nke dị nso na TOP nke nsonaazụ ọchụchọ. Ọ bụrụ na ileba anya na njikọta njikọ nke nnukwu ụdị a, ị nwere ike ịcheta na ọ nweghị saịtị ndị ọzọ nwere ikikere na ibe. Ebe nrụọrụ ndị a nwere ike ịkwado maka ọchụchọ ndị na-asọ asọmpi na-enweghị otu njikọ dị mma na ibe a. Ụzọ ha si eme ya na ikike na ntụkwasị obi ha ji Google rụọ. Ọ bụ ihe àmà doro anya nke na-egosi anyị na anyị kwesịrị ilekwasị anya na ụlọ ọrụ ma ọ bụghị njikọ njikọ na saịtị. Ọ ga - enyere gị aka ịghọ nnukwu aka na nchọnchọ engines ma bulie ọkwa gị Source .